FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA LAEKENOIS BELZA - ALIKA
Mia the Belgian Laekenois amin'ny faha-3 taonany
bel-juh n LAK-in-wah
Miorina sy mifandanja tsara ny vatana, misy endrika bika boribory raha jerena avy eo amin'ny sisiny. Ny sofina miorina dia telozoro ny endrika, miaraka amin'ny haavony mitovy amin'ny sakany, ary apetaka ambony lohany. Ny volomaso somary manondro kely dia mifanitsy amin'ny topline amin'ny karan-doha sy ny kasety, fa tsy dia maranitra loatra. Ny molotra sy ny lohany dia somotraviavy, manome ilay alika fijery mibontsina sy volon'ondry. Ny maso salantsalany, miendrika amandy dia mainty misy sisiny mifanohitra amin'ny volo miloko maivana kokoa. Hozatra ny foibe nefa tsy mavesatra. Ny volo matevina dia kirihitra amin'ny rambony, saingy tsy misy volom-borona miavaka. Lalina ny tratra, mahatratra hatramin'ny kiho. Ny tongotra eo anoloana dia mahitsy sy mifanitsy ary mitsangana amin'ny tany. Ny tongotra boribory dia toa ny saka ny endriny. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Ny rambony lava dia matevina amin'ny fotony ary mahatratra ny hock farafaharatsiny. Mainty ny orona ary tokony ho tery ny molotra. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny hety na manaikitra. Ny palitaon'ny laekenois dia lava manarona, palitao tariby manarona ny vatana amin'ny volo izay mety hahatratra roa santimetatra. Ny loko dia misy elanelam-borona manomboka amin'ny zana-kazo ka hatramin'ny mahogany miaraka amin'ny lamba mainty.
Ny mahalana indrindra amin'ireo karazany efatra an'ny Sheepdog belza, ny Laekenois Belzika dia alika mamiratra sy mpankato. Izy io dia voafaritra sy mandinika miaraka amin'ny toetra voaaro sy fiarovana mafy amin'ny faritra. Mifandraisa tsara hisorohana azy tsy ho saro-kenatra na mora tohina. Ireo mpiandry ondry belza dia mila tompony efa za-draharaha izay hentitra, nefa tsy mavesatra tanana. Raha masiaka ianao na mahery setra dia ho lasa tsy miara-miasa izy ireo. Ny tompony dia mila mampiseho fahatokisana, fahefana voajanahary amin'ny alika. Fitsipika mifanaraka tsy maintsy apetraka ary atao mazava. Fiarovana voajanahary ity karazany ity ka tokony hampiofanina sy hifaneraserana tsara hatramin'ny fahazazany. Ny alika kely dia tokony ampifandraisina hatrany am-bohoka. Tsara ho an'ny fankatoavana ny asa sy ny fifaninanana, mahatonga azy ireo ho polisy tsara ireto alika ireto amboa mpiambina . Ity karazana asa ity no asan'izy ireo voalohany. Na izany aza, manao biby fiompy tena tsara izy ireo raha manana tompona afaka manohitra ny sainy amin'ny fisian'ny fitarihana. Izy ireo dia mailo hatrany, mailo ary tsy mivadika. Ny Laekenois belza dia tsara amin'ny ankizy raha mifanerasera tsara amin'izy ireo. Ity karazana ity dia mila tafiditra ao amin'ny fianakaviana fa tsy hihidy ao anaty tranon-kenna. Mila fitarihana izy ireo, fanatanjahan-tena isan'andro miaraka amin'ny fiofanana sy ny fiarahana, satria raha tsy misy izany dia mety manjary manimba ary sarotra tantanana. Ny Laekenois Belzika dia angovo avo, manana fahaiza-manao avo ary haingana azo. Mila asa hatao izy ireo, indrindra raha mifanerasera amin'ny tsipika fiasana ianao. Mitandrema rehefa mampiditra an'ity alika ity amin'ny biby fiompy tsy kaninina kely . Mety hanjakazaka amin'ny alika hafa izy ireo ary mila tompona afaka mifampiresaka amin'ilay alika fa fitondran-tena tsy ilaina ny manjaka. Raha mifanerasera tsara amin'ny saka sy biby hafa izy ireo, dia tsy tokony hisy olana izany. Ny Laekenois belza dia mety aseho amin'ny fomba voajanahary fiompiana fiompiana toy ny fanenjehana sy ny fihodinana, ny fivezivezena mora foana mandritra ny ora maro ary ny fikitikitihana ny voditongotry ny olona. Tsy maintsy ampianarina izy ireo mba tsy hanao izany amin'ny olona. Alika be fitakiana ity. Mila tompona efa za-draharaha satria mora sarotra ny mifehy raha tsy hain'ny tompony ny mitantana azy. Ny fomba itondran'ny tompony ny alika dia mety hiteraka fahasamihafana lehibe amin'ny toetrany sy masiaka . Miresaha amin'ny olona efa za-draharaha amin'ny karazany alohan'ny ividiananao ny alikanao. Matetika ireo alika ireo dia mahavariana fa tsy miorina amin'ny rakitsoratry ny zava-bita fotsiny ny fividiananao. Alao fotsiny ity karazana alika ity raha azonao tsara ny dikan'ny atao hoe Alfa .
Lanja: 55 - 65 pounds (24 - 29 kg)
Ity karazana mafy orina sy salama ity dia tsy manana olana ara-pahasalamana lehibe. Ny ahiahy kely izay efa hita dia ny aretin-koditra, ny olana amin'ny maso, ny fahamendrehana tafahoatra, ny herisetra tafahoatra ary indraindray ny tampon-tenda ary ny tady sika.
Ny Laekenois Belzika dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Izy io dia mavitrika mavitrika ao an-trano ary hanao izay tsara indrindra farafahakeliny tokotany habe. Aleon'ity karazany ity ny toetrandro mangatsiaka, fa mifanaraka tsara amin'ny hafa. Afaka miaina ivelan'ny trano izy io fa aleo miaraka amin'ny olony.
Ilay palitao goavambe sy malefaka an'ny Laekenois dia mila hamboarina indroa isan-taona, miankina amin'ny kalitaon'ny palitao. Tokony hesorina ny volo maty sy be loatra. Tohero ny soso-kevitra mba haingo tsara ny alikao satria simba ny palitao nandritra ny taona maro. Ho fanampin'ireo hazavana maivana indraindray, dia ampiasao tohotra nify maranitra ho an'ny taovolo. Ny palitao miloko volom-borona dia henjana, maina ary somary mikorontana kely. Tokony ho endrika tsy dia masiaka izany fa tsy miolakolaka mihitsy. Mandrosoa raha tsy tena ilaina tokoa, satria ny fandroana dia manaisotra ny famonoana ny palitao.
Ny Laekenois Belzika no tsy fahita firy amin'ireo karazana efatra amin'ny zanak'ondry belza. Ny alika dia ny Laekenois Belzika, Groenendael Belzika , Malisiana Belzika , ary ny Tervuren Belzika . Ny alika rehetra dia mizara fototra iraisana. Any amin'ny ankamaroan'ny firenena sy klioban'ny fiompiana ny alika efatra dia heverina ho karazany iray ihany miaraka amin'ny karazany maro karazana amin'ny karazana palitao. Ny alika efatra dia mizara fari-pahaizana amin'ny firenena rehetra afa-tsy ny AKC, izay hatramin'ny 1959 dia manaiky azy ireo ho karazany misaraka ary tsy manaiky ny tsy fahita firy Laekenois mihitsy. Ny UKC, izay rezistra amerikana koa, dia manaiky ny karazany efatra ho karazany iray. Miovaova sy mahira-tsaina tokoa, ny karazany efatra amin'ny vala Belzika dia manana talenta maro isan-karazany, ao anatin'izany fa tsy voafetra ho azy, ny asan'ny polisy toy ny, ny zava-mahadomelina sy ny fikarohana baomba, ny fiarovana ary ny Schutzhund, ny fikarohana sy ny famonjena, ary koa ny fankatoavana, ny hakingana, ny fanarahana, fiompiana, sled ary fisarihana sarety ary ho torolàlana ho an'ireo jamba sy mpanampy ireo sembana. Ireto alika avo lenta ireto ary tena marani-tsaina dia mila fitarihana, mila fanamby ary ampiasaina isan'andro ary noho izany tsy natao ho an'ny rehetra, fa afaka manao namana akaiky fianakaviana amin'ny tompony marina. Ny Malisiana Belzika no voalohany amin'ireo mpiandry ondry efatra nametraka karazana. Mandra-pananganana ny efatra hafa amin'ny karazany dia nantsoina hoe 'Berger Belge a poil court autre que Malinois,' izay midika hoe 'Sheepdog miakanjo fohy Belzika izay tsy i Malinois.' Ankehitriny, ny vala efatra dia malaza any Belzika, miaraka amin'ny Laekenois sy Malinois izay matetika ampiasaina ho alika karazana miasa, noho ny Belzika Groenendael sy Tervuren, fa ny karazana rehetra dia mbola mahatonga mpiasa tena mahay.
ABLA = Fikambanana Laekenois Belzika amerikana
CH International, Belzika, Holandey Pierrewit van Kriekebos
Laekenois mpiandry belza, an'i Miss Karen Edwards (Aostralia) BISS Australian Ch Lanaken Ruff N Ready (IID) (HIT)
Sprout, Unite 'des Fauves de Saline nampiseho ondry miasa. Tompony: Sonja Ostrom. Mpiompy: Christine sy Bernard Rie. Sire: Bel. Ch. Opiun van Kriekebos. Tohodrano: Bel. Ch. Qwini avy any Kriekebos. Mpaka sary: ​​Kathy Champine
Olana amin'ny Inka ilay mpiandry omby belza Lakenois puppy amin'ny 10 herinandro
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Laekenois Belza
Sary laekenois belza 1
Sary laekenois belza 2
Sary Laekenois Belgian 3
Sary laekenois belza 4
Sary Laekenois Belgian 5
Sary laekenois belza 6
Sary Laekenois Belgian 7
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika pakistianina
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika brug
Sary momba ny fiompiana alika mastiff, 3
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Utonagan
AKC, karazana Kennel amerikana, AKC
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika amerikana foxeagle
ohatrinona ny alika chiantaraie
mena mifidy nanenjika beagle Mix